Qurxinta - Ragga Qaabka Leh | Ragga leh Qaabka (Bogga 2)
Raadi wax walba oo ku saabsan kareemada nuujinta ee ragga. Sida ay u shaqeyso, faa iidooyinka ay leeyihiin, tilmaamaha waxtarka leh iyo kuwan waa noocyada ugu fiican.
Udugyada ugu fiican ragga
Soo ogow carafyada ugu fiican ee ragga, faa iidooyinka iyo qasaaraha noocyada kala duwan iyo faa'iidooyinka qaaciidooyinka dabiiciga ah.
Baro maaskaro timaha ugu fiican, mid guriga lagu sameeyo iyo mid diyaarsan, iyo sidoo kale talooyin badan oo la xiriira isticmaalkooda.
Is-jaridda, sida dhakhso loogu helo
Soo ogow faa iidooyinka iyo qasaaraha isdaba-marinta, iyo sidoo kale tilmaamaha ugu wanaagsan ee lagu heli karo tan ugu fiican ee suurtogalka ah.
Soo ogow nooca nadaafadda joogtada ah ee ragga qaba maqaarka qalalan iyo cunnooyinka ay faa'iido u leeyihiin si ay caafimaad ugu ahaadaan.
Sida loo helo ilko cad
Soo ogow caadooyinka, talooyinka, tabaha iyo daaweynta aad ku dhaqmi karto haddii aad rabto inaad hesho ilko cad. Hadaad rabto inaad cadeyso dhoola cadeyntaada, taladeena waad ku guuleysan doontaa.
Shea subagga quruxda
Shea butter, oo ah shey si aad ah ugu sii kordha waxyaabaha dumarka lagu qurxiyo. Waa maxay guryaha ay leedahay? Immisa nooc ayaa jira? Waa maxay habka saxda ah ee loogu isticmaalo in lagu helo natiijooyin wanaagsan? Halkan ka hel jawaabaha su'aalahan iyo waxyaabo badan oo xiiso leh oo ku saabsan shea butter.
Ogow waxa lakabyada maqaarku yihiin, shaqooyinka ay qabtaan iyo daryeelka ay u baahan yihiin si ay u daahiyaan gabowga iyo inay caafimaad ahaadaan.
Daaweynta guriga wajiga nin qarnigii XNUMXaad
Ninka qarniga XNUMXaad wuxuu daryeelaa maqaarka wejigiisa. Tani waxay ku lug leedahay isticmaalka alaabada dabiiciga ah iyo kuwa ganacsiga iyo daawooyinka loogu talagalay dayactirka, nafaqada iyo daaweynta epidermis.
Afar kareem oo jirka ah si loo hagaajiyo nadaafaddaada caadiga ah
Waxaan kuu soo jeedineynaa afar kareem oo jirka ah oo kaa caawin doona inaad hagaajiso nadaafaddaada joogtada ah haddii aad dareento inaad fiiro gaar ah u leedahay maqaarka wajiga marka loo eego tan jirka.
Ku ilaali maqaarkaaga saliidda leh alaabtan wax ku oolka ah
Waxaan soo jeedineynaa afar ka mid ah wax soo saarka ugu fiican si loo xakameeyo dhibaatooyinka soo raaca maqaarka dufanka leh, kuwaas oo si wadajir ah u sameeya hawl maalmeed adag.
Sida looga hortago dayrta / jiilaalka inay maqaarkaaga ka dhigto mid qallalan oo adag
Haddii aad rabto inaad ka hortagto maqaarkaaga inuu u muuqdo mid qallalan oo cidhiidhi ah deyrta / jiilaalka, tixgeli inaad tabahaas ku dhaqan geliso jadwalkaaga maalinlaha ah ee qurxinta.
Cadarka sida ay tahay shakhsiyaddaada
Ragga qaarkiis, xulashada cadarka waa hawl fudud oo fudud: way isku dayaan, way ka helaan waana taas. Dadka kale, ma aha sidaas fudud.
Waa sidee cadarka labka ah ee soo jiita dumarka?
Badanaa waxaa la yiraahdaa cadarka ragga waa daroogada dumarka, laakiin tani waxay ku xirnaan doontaa dhadhanka mid kasta oo ka mid ah. Waxaa jira noocyo badan oo udgoon ah.
Sidee loo daryeelaa timahaaga xagaagan?
Xagaaga, dad badan, waa waqtiga ugu badan ee sanadka la filayo. Laakiin sidoo kale waa waqtiga ugu badan ee waxyeello u geysta timahaaga heerkulka sare.
Tilmaamaha udgoon ee wanaagsan maalintii oo dhan
Hadaad shaki kaqabto udgoon wanaaga, waa wax ay qiimeeyaan gabdhaha, bulshada waana mid bixisa faa iido wanaagsan. Laakiin waxa ugu muhiimsan waa inaan dareemeyno badbaado, nadiif.
Faa'iidooyinka kareemada wajiga ka hor sariirta
Maanta, in la mariyo kiriimyada wajiga ka hor sariirta maahan wax caadi u ah dumarka.
Sida lugaha loogu diyaariyo kabaha xagaaga
Tilmaamahan ayaa kaa caawin doona inaad hubiso in cagahaagu aysan isku dhicin xagaaga, iyo sidoo kale inuu difaaco marka aadan xirneyn sharaabaadyada.
Sidee loo doortaa caraf udgoon ee nolosha kula socon doona?
Wareysiyada shaqada, taariikh jaceyl, ama is dhexgalka bulshada ee maalin walba lala yeesho dadka kale waxay u baahan yihiin nadaafad wanaagsan de iyo caraf wanaagsan.
Sida looga hortago timo daadashada
Had iyo jeer way dhacdaa in caajisnimada darteed aynaan u daweynin timo luminta illaa aan ka aragno inay noqotay dhibaato dhab ah.
Imaatinka xagaaga. Waxyaalaha qoraxda laga qaado
Waxaa jira wacyigelin isa soo taraysa oo ku saabsan baahida loo qabo in la isticmaalo muraayad qorraxeed wanaagsan. Iskusoo wada duuboo, taageerayaasha qubeyska wanaagsan.
Tilmaamaha quruxda ee ragga ka hor sariirta
Si aad ugu baxdo adoo eegaya sida ugu fiican, oo leh muuqaal caafimaad leh, waxaa jira tabo uu nin walba sameyn karo ka hor inta uusan seexan.
Sida sifiican loogu qoyo wajigaaga, timahaaga iyo gadhkaaga
Qoyaanka wejigaaga, timahaaga, iyo gadhkaaga si joogto ah ayaa lagama maarmaan u ah in la soo saaro muuqaal wanaagsan. Tilmaamahan ayaa kaa dhigi doona boqorka fuuq-baxa.
5 dhaqan oo kaa dhigi kara inaad gabowdo
Shantan dhaqan waxay kaa dhigayaan kuwo da 'weyn. Ha uga fududaan duuduubnaanta iyo khadadka ganaaxa oo ha ku noolaan nolol iyaga ka xor ah.
Wax kasta oo aad u baahan tahay si aad gacmahaaga u sameysid waxay ka dhigayaan waxa ugu fiican ee suuragalka ah
Mar dambe ma qarin doontid gacmahaaga cabsi aad ka qabtid inay yihiin kuwa aan la soo bandhigi karin. Seddexdan shey ayaa kaa caawin doona inaad gacmahaaga u ekaato mid qumman.
Saddexda kareem ee kaliya ee aad ugu baahan tahay musqushaada
Si aad maqaarkaaga uga dhigto mid buuq leh oo iftiimaya, muhiim maahan inaad ka buuxiso musqushaada alaabooyin. Kuwani waa alaabada kaliya ee aad u baahan doonto.
Afarta shey ee lagama maarmaanka u ah ragga timaha wanaagsan
Kuwani waa afarta alaab ee loo baahan yahay inay leeyihiin ragga timaha wanaagsan. Tirinta shaambooyada, toners, jel hagaajinta iyo shaambooyada qalalan.
Khiyaanooyinka guriga lagu sameeyo, fudud iyo dabiiciga ah ee wajiga lagu qurxiyo
Tilmaamaha lagu sameeyo guriga ee lagu nadiifiyo
Sanqadhyadu waxay u yimaadeen moodada ragga ... bushimahaaga kordhi
Moodooyinka morritosku waxay gaareen qaybta ragga. Halkan waxaan ku sharaxeynaa sida loo helo bushimaha jilicsan ee buuxa si loo kordhiyo soo jiidashadaada.
Talooyin ku garaaca finanka dadka waaweyn
Waxaan sharxeynaa sida ragga waaweyn ee fin-doobka qaba ay u wajahaan bogsashada finanka iyo habka guud ee qurxinta si looga hortago soo muuqashadooda.
Suuxdinta, aasaasiga ka hor qorrax qoynta
Waxaan ugu wici karnaa siyaabo fara badan, dabrin, xoqid, xoqid, laakiin shaki la'aan waa mid ka mid ah daryeelka aasaasiga ah ee ...
Ahmiyada iyo faa iidooyinka ay leedahay isticmaalka wajiga xoqida
Way cadahay in raggu aad iyo aad uga taxadaraan sawirkeena iyo inaan ka walaacsanahay muuqaalka iyo daryeelka ...
Sida loo codsado dusha isha si sax ah
Xaaladda wareegga indhahaagu wax badan buu ka sheegaa midkeen kasta, tanina waa mid ...
Daryeelka maqaarka: 5 tallaabo oo maqaarka ugu habboon
Sidee u daryeeshaa maqaarkaaga? Maanta waxaan u soconayaa dhamaadka usbuuca, markii aan waqti badan isku haysanno, waan iska baxeynaa ...
Talooyin ku saabsan sunna baarista ragga
Baarayaasha sunnadu aad ayey uga badan yihiin caqabad ka hortageysa dhidid ama biyo inay gaaraan indhaheenna….
Taxanaha Shaybaadhka Max LS, ee ragga dalbanaya
Haddii aan u baahdo in aan qeexo waxa Max LS yahay, waxaan dhihi lahaa waa dhammaadka-sare ee daaweynta Shaybaarka Taxanaha ah ...
Qurxinta ragga: Monsieur waxaa qoray Jean Paul Gaultier
Mid ka mid ah shirkadaha ugu horreeya ee soo bandhiga khad gaar ah oo loogu talagalay ragga ayaa ah had iyo jeer daandaansi Jean Paul ...
Maaskaro Aspirin ah
Mid ka mid ah waji-xidhaalaha ugu fudud ee la samayn karo oo aad waxtar u leh ayaa ah maaskaro aspirin ah. Gaar ahaan waa ...
Qurxinta ragga: wax qariya oo loogu talagalay wareegyada madow
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu waawayn ee la isku qurxiyo ee ragga ayaa ah in la qariyo goolal madoow oo cabsi badan. Hurdo la’aan, daal ...
Maaskarada guryaha lagu sameeyo si loo nadiifiyo aagga T
Boggan waxaan horeyba si rasmi ah kuugu soo bandhignay aagga «T aagga..
Waxaan tijaabinay, Gisèle Denis xariiqda qorraxda
Waa inaan horeyba ugu haysannaa shaashad qorrax wanaagsan shandadeena musqusha, ama xitaa inbadan gacanta. Laakiin haddii aadan weli haysan ...
Qoyaanka maqaarka xasaasiga ah: Nivea vs L'Oreal
Haddii ay jiraan laba magac oo nin walba isticmaalay waqti noloshiisa ka mid ah, shaki la’aan waa Nivea ee Ragga ...
Xagaagu wuu ka yaraadaa wuuna yaraadaa. Waxaan bilownay inaan ka fikirno "qalliinka bikininka". Waxaan dooneynaa inaan u ekaano caato, madow, ...
La xiiray, kahor ama kadib?
Weli maanta, qarnigii XXI, waxaa jira kuwa aan caddayn goorma ayaa ugu habboon in la xiiro, ka hor ama ...
Qurxinta ragga, horeyba waa xaqiiqo
Isbedelka ku wajahan sinaan la'aanta iyo xaqiiqda ah in ragga ay si aad ah uga warqabaan muuqaalkooda, ...
Sida loo dhaqo wajigaaga sifiican
Marar badan waxaan doorbidnaa inaan wajigeena ku maydhanno saabuun iyo biyo, xiirno oo u degno dhanka ...